Mudanayasha Kubadda Koleyga Afro 2019: Libaaxyada Sharafta leh ee Nagaya
ACCUEIL » kale Mudanayaal Kubadda Koleyga ah oo loo yaqaan 'Afro Basketball Ladies' 2019: Libaaxyada Libaaxyada oo sharaf ka leh Lady Tigers
Kubadda koleyga Afro 2019: libaaxyada libaaxyada ee Lady Tigers
Kamrooniyiinta waxay si weyn u sujuudeen Nigeria, 13 August 106 oo ka dhan ah 39 ARENA Dakar ee Senegal.
Waxqabadka wanaagsan ee AMINA NJONKOU 16 dhibco, dib-u-celinta 8, kala-goynta 2 iyo marin go’aammo ah kuma filna in lagu joojiyo Lady Tigers masayrka cinwaankooda.
Ka sarreyn la xaqiijiyay
Horyaallada haweenka iyo haweenka Nigeria ayaa ka adkaaday kooxda Indomitable Lionesses bilowgii ciyaarta. Libaaxyada Indomablees gebi ahaanba way lumeen, iyagoo wajahaya koox adag, khibrad iyo xariif ah ficiladiisa kala duwan. Natiijooyinka jinsiyadaha, 4-rubuc-rubuc ee ay door bidaa Nigeria: 27-21 kii hore, 16-28 ee labaad, 10-23 ee saddexaad iyo 4ème, ugu sharaf jabinta, 6-34. Amina Njonkou ma heli karto cudurdaar:
Amina Njonkou, gadaal iyo kabtanka
Waxaan ahayn kuwa qosol leh. Run ahaantii, kumaan ciyaarin haba yaraatee, waxaa na soo weeraray Nigeria. Tababarayaashu way noo digeen. Waxay noo sheegeen, inay noqon doonaan kuwa dagaal badan, waxay mari doonaan khadadka gudbinta, waxay aadi doonaan dib u soo celinta oo waxaan sameynay ka soo horjeedka waxa tababarayaasha na siiyay sida tilmaamaha ah. Natiijadu way jirtaa, si xun ayaan u ciyaarnay.
Libaaxyada wali rajaynayaan
NATOSHA CUMMINGS, Tababaraha Naadiga Kubadda Koleyga ee Lionesses
Had iyo jeer waxay raadinayaan billaddii ugu horreysay ee abid dahab ah, Indomitable Lionesses of the Orange Ball. Macalinkooda, NATOSHA CUMMINGS Mareykan wuxuu sidoo kale qabsan karaa kubada si uu u cadeeyo joogitaankiisa. The Lionesses way ka warqabaan tan, Captain AMINA NJONKOU wuxuu u arkaa mustaqbal wanaagsan kooxda inteeda kale tartanka: “Waxaan u adeegsan doonaa xaqiiqda ah inaan ku jees jeesay inaan muujino waji fiican iyo ka dib markaan isku dayeyno inaan badino. wax yar ka sii soco.
Mudanayashaha Kubbadda Afro 2019 ayaa ka dooday 10 bishii Agoosto ee la soo dhaafay Dakar Senegal waxayna ku dhammaaneysaa 18 xigta Agoosto. Qaybo ka mid ah tartamada, Cameroon ayaa kaalinta labaad ka gashay Pool B. Indomitable Lionesses ayaa ka adkaatay reeraha Masaarida bishii Agoosto 14 oo loogu talagalay inay ku guuleystaan ​​wareega quarter-finalka. Fursad ay ku fiicnaato wixii ka fiicnaa 2017, Mali, halkaasoo ay ku qanacsanaayeen booska 8. Kulanku wuxuu ka dhacayaa 17H 30, waqtiga Cameroon.
Qodobka Kubadda koleyga Afro 2019: libaaxyada libaaxyada ee Lady Tigers ayaa marka hore muuqatay Cameroon Radio Television.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/08/afro-basket-dames-2019-les-lionnes-humiliees-par-les-lady-tigers/
Kameroon: Ka qeybqaadashada fadhiga nadiifinta, is-hoosaysiinta agaasimaha cusub ee cusbitaalka gobolka Buea ayaa qaldamay
Dib-u-soo-noqoshada Gaarka ah ee Cameroon: dadka u ololeeya arrimaha qurbo-joogga ayaa abaabulaya inay caawiyaan carruurta maxaabiista ah